संरक्षणका लागि ब्लगिङ (Blogging4Conservation]: चेतना | Conservation Blog in Nepal
किन भाग्छन् उनीहरू ?
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Saturday, March 10, 2012 with No comments
अंक १४ -माघ १ २०६७
अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको राजमार्ग रसुवामा बन्दैछ । त्रिदेशीय सम्बन्धको विस्तारित मार्ग टिमुरे, लिङलिङ, स्याफ्रुबेशी हुँदै बनिरहेको छ । अब विकास हुन्छ भनेपछि दिनानुदिन रसुवागढी जाने स्वदेशी तथा विदेशीको चाप बढिरहेको छ । हुनपनि सजिलो छ, स्याफ्रुबेशीबाट धेरै टाढा छैन । यो अवस्था हामीले पाइरहँदा रसुवाको भविष्य उज्यालो हुने पक्का छ । केही समय अघि हामी एक कार्यक्रमको सर्न्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग बन्दै गरेको नजिकको गाउँ थुमन पुगेका थियौं । स्याफ्रुबेशीबाट तीन घण्टा बराबरको दूरीमा रहेको थुमन गाउँ अत्यन्त सुन्दर थियो । पुछारमा अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग बनिरहँदा थुमन जाने सडकको रेखामात्र थियो । साँघुरा मोड र सडक, देख्दा कहिल्यै गाडी गुड्दैन जस्तो, मानिस हिँड्न पनि मुस्किल सडक । अन्तर्राष्ट्रिय मार्गकै एक छेउबाट थुमनको लागि सडक छुट्टयाइएको रहेछ ।
ती थोरै सडकका असजिला मोडहरू पार गर्दै हामी तार्सा (मेन्दो) भन्ने गाउँमा पुग्यौं । त्यहाँको जनजीवन हामीले राम्ररी नियाल्न पाएनौं । घाम लागिसकेको थिएन, पौषको जाडो, कोही पनि बाहिर निस्केका थिएनन् । त्यहाँका विद्यालयका शिक्षकले हामीलाई चिया खुवाए । त्यसपछि हामी थुमनका लागि अघि बढ्यौं ।
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूसँग हाम्रो कार्यक्रम थियो । घरभित्रको धुवाँ न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । धुवाँको विषयमा कुरा गर्दा हामीले त्यहाँ चेतना नभएको पाएनौं, केवल अभियानको खाँचो रहेको पायौं । तीन वा चार दलका कुरा ती आमाहरूलाई राम्रो ज्ञान रहेछ । गाउँ परिषद्को कुरा गर्दा दल विनाको परिषद् वा दल नभई विकास, योजनाको सम्भव छैन भनेर उनीहरूले राम्ररी बुझेका रहेछन् ।
हामीहरू तीन जना थियौं । रामहरि देवकोटा, उनलाई थुमनका सबैले चिन्दा रहेछन् । अर्का साथी एभिन्यूज टेलिभिजनका बलराम घिमिरे । कार्यक्रम सकेर हामी गाउँतिर लाग्यौं । टेलिभिजनका पत्रकारसँगै रहेकोले ओखलमा धान कुट्दै गरेको दृश्य खिच्न व्यस्त भइयो । धान कुटिरहेकाहरू कोही हामी देख्ने वित्तिकै भागे त कोही क्यामेरा निकालेपछि भागे । हामी वरिपरि जादै गर्दा उनीहरू भाग्छन् । केही दृश्यहरू लिनको लागि अनुनय गरेपछि मात्र खिच्न पाईयो । उनीहरूलाई थाहा छैन, क्यामेरा र फोटोका महत्व । खिचेको दृश्य देखाएपछि वा आफ्नै दृश्य क्यामेरामा देखेपछि उनीहरू दंग परे ।
थुमनगाविस- ८ तार्सा (मेन्दो) गाउँ अलि दुखीहरूको गाउँ रहेछ । केही समय अघि धादिङको तिप्लिङबाट आएका मानिसहरू त्यहाँ बस्दा रहेछन् । उनीहरूको नाममा जग्गा रहेनछ । हुन त यस्ता समस्या धेरै छन् रसुवामा । विद्यालयसँगैको घरमा एक परिवारका दम्पत्ति ओखलमा धान कुट्दै थिए । भिडियो खिच्नको लागि अनुरोध गर्यौं । मुस्किलले नै खिच्नको लागि अनुमति पाईयो । एकजना त्यही गाउँका पूर्ण तामाङको सहयता नभएको भए हामीले खिच्न नपाउने थियौं । असाध्यै लाज मानेर दुवै दम्पत्तिले धान कुटे । उनीहरूले धान कुट्दै गरेको दृश्य पछि क्यामेरामा देखाइदिए पछि आफ्नो दृश्यबाट खुसी र अचम्म भए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग बन्दै गरेको नजिकको गाउँका जनता कहिले विद्युतीय जमानामा प्रवेश गर्लान - इन्टर्रर्नेटको कुरा त उनीहरूको जीवनमा कहिल्यै आउँदैन, यो निश्चित छ । तर टेलिभिजनको दृश्यप्रति उनीहरूको पहुँच हुनु आवश्यक छ । हामीले सोच्यौं, ठीक मुनीतिर चिल्ला पजेरामा ठूलाबडा कुदिरहँदा यी दम्पत्तिले कस्ता गाडी चढ्लान् ? गाउँका अलि बुझेकाहरूको कृयाकलापमा यिनीहरूको पहुँच कहिले पुग्ला ?
ती परिवारको एक क्षणको दृश्य नियाल्दा उनीहरूको परिवार पितृसत्तात्मक रहेछ । त्यहाँको दृश्य खिचेपछि बालबालिकाहरूलाई विस्कुट दिँदा बालबालिकाले आमाको हातमा दिए । हामीले सबैले बाँडेर खानुस् भन्यौं । तर सबैलाई बाँड्नको लागि पिताको अनुमति चाहियो । ५/७ जना बालबालिका थिए, परिवारका नेतृत्वकर्ता पिताको नै हातबाट विस्कुट बाँडियो । त्यहाँको दृश्य हर्ेदा श्रीमानप्रति श्रीमतीको असाध्यै सद्भाव छ । परस्परमा मायाममता छ । उनीहरूको मुहारमा दुखभित्रको खुसी छ, हाँसो छ, तरपनि भित्रभित्र दुख लुकिरहेको छ ।
Labels: चेतना, विकास, सामाजिक अवस्था
समाज जागरणमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको भूमिका
रसुवा खबर वर्ष१, अंक ९, २०६७ साल मंसीर २५ गते शनिबार
नेपाली समाजमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । आमा समूहबाट छानिएर समाजको सेवा गर्न प्रतिनिधि आमाको रूपमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरू रहेका हुन्छन् । राज्यले र्सवस्व खनाएर पालेका कर्मचारीको भन्दा यी सेविकाहरूको धेरै सहयोग हाम्रो समाजले पाइराखेको छ र हामीले देखिराखेका छौं । कहिले खोपको कुरा लिएर त कहिले स्वस्थ जीवनको कुरा लिएर हाम्रा दैलामा टुप्लुक्क आइपुगेका हुन्छन् यी महिलाहरू ।
न हामीले तलब दिएका छौं न राज्यले नै । तालिक गोष्ठीमा सहभागी भएवापत पाउने पारिश्रमिकको भरमा उनीहरू गर्वका साथ घरदैलो अभियानमा पुगिराखेका हुन्छन् । गाउँघरका भनौं या बालबालिकाका पहिलो डाक्टरको रूपमा यी स्वयं सेवकहरू स्थापित भइरहेका छन् । गाउँघर, टोल सरसफाइ वा प्रदुषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका यी महिलाहरूको जीवनयापनमा वा जीवन परिवर्तनमा राज्यले कुनै सहयोग पुर्याउन सकेको छैन ।
बालबालिकाहरू विरामी पर्दा वा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक ज्ञानको लागि समुदायका अरू आमाहरू पनि महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको ढोका पुगिहाल्नु पर्दछ । स्वास्थ्य चौकीको पहुँच नपुगेका स्थानमा त सिङ्गो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उनस्हरूको हातमा रहेको हुन्छ । रसुवा जस्तो विकट वस्तीमा त झनै उनीहरू जिम्मेवारी ज्यादा रहेको पाईन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देशमूलक चेतना प्रवाह गर्ने आमा समूहका नेता आमाहरू विकास निर्माणका निम्ति पनि पछि परेका छैनन् । महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको संख्या त्यति प्रशस्त हुदैन । जनसंख्याको आधारमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्वस्फूर्त सेवा गर्ने भावना भएका महिलाहरूलाई वा प्रभावशाली महिलाहरूलाई आमा समूहले नियुक्ती गरेको हुन्छ । तर आजभोली आमा समूहहरू त्यति सकृय हुन नसकेका कारण कतिपय गाउँहरू सेविका विहिन अवस्थामा छन् ।
अरु क्षेत्रमा जसरीे प्रभाव परेको छ राजनीतिक तरङ्गको, त्यति प्रभाव यो क्षेत्रमा देखिदैन । अथवा राजनीतिक बिम्बले भने महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूलाई जञ्जीरमा पार्न भने सकेको छैन । आफ्नो क्षमताले भ्याएको सेवा गर्नका लागि तल्लीन हुने समाज परिवर्तनका सहयोद्धा महिलाहरू राजनीतिक तरङ्ग उथुलपुथुल हुँदा पनि आफ्नै कर्तव्यबोधमा निहित छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यार्लयसँग यस्तो बलियो सञ्जाल छ, जुन सञ्जालमार्फ् सूचनामूलक सन्देश बस्ती बस्तीमा पोख्न वा प्रवाह गर्न सजिलो छ । राज्यका वा सरकारी कार्यालयका अरु निकायहरू माझ यो अवसर सिर्जना गर्न गाह्रो पर्छ । यदि राज्यका अन्य निकायले पनि महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको माध्यमद्दारा सन्देश प्रवाह गर्ने हो भने वा सन्देश प्रवाह गरेवापत उपहार वा पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने हो भने एकातिर उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता थपिने थियो भने अर्कातिर बस्तीका कुरा राज्यका निकायमा र राज्यका कुरा बस्ती बस्तीमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ । उनीहरूमार्फत मानव अधिकारका विषयलाई संरक्षण गर्न पनि मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।
Labels: चेतना, स्वास्थ्य